Amaqhinga wetelegram ozoba nguchwepheshe weqiniso ngawo | Izindaba zamagajethi
AmaVillamandos | | General, AmaSelula
yocingo Sekube ngokuhamba kwesikhathi enye yezicelo ezinhle kakhulu zokuthumela imiyalezo futhi ingenye yezindlela eziphambili ze-WhatsApp. Uhlelo lokusebenza oluphethwe yi-Facebook namuhla lungenye yezinhlelo zokusebenza ezidume kakhulu nezisetshenzisiwe emhlabeni, yize ukwehluleka nezinkinga zalo zikubeke ezikhathini zakamuva ku-trigger futhi abasebenzisi abaningi ngokwengeziwe banquma ukuqala ukusebenzisa iTelegram.
Ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa sikhulume nawe ngeTelegram, futhi saze sakutshela kudala Izizathu ze-9 kungani, ngombono wethu, idlula kude i-WhatsApp. Njengoba sesivele sazi ukuthi kancane kancane ubulokhu uxhumana futhi usebenzisa lolu hlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo, namuhla sifuna ukukunikeza Amathiphu ayi-7 ozoba yisazi sangempela ngawo. Sinqume ukukunikeza okungu-7 kuphela ukuze ufinyelele ezingeni lochwepheshe, okulinde ukuthi ufinyelele ezingeni le-guru ngamanye amathiphu esizowashicilela ezinsukwini ezimbalwa.
1 Qala ingxoxo yangasese
2 Ukuzibhubhisa komlayezo
3 Hlola kabili
4 Vimba abasebenzisi
5 Dala iqoqo elibanzi lezitika
6 Jabulela i-Telegram kukhompyutha yakho
7 Ukukhansela i-akhawunti yakho nokususa idatha yakho akuyona into engenakwenzeka
Qala ingxoxo yangasese
I-Telegram isivele isisicelo esisinikeza okubaluleke kakhulu, kepha uma lokhu kubonakala kukuncane kuwe, ungahlala uqala nganoma yikuphi oxhumana naye ingxoxo yangasese. Kunoma iyiphi ingxoxo esiyenzayo kulolu hlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo, izobethelwa, kepha ngengxoxo yangasese izobethelwa kakhulu.
Ngaphandle kwalezi zingxoxo zangasese Azikwazi ukudluliselwa futhi ngeke zishiye noma yimiphi imikhondo kumaseva weTelegram. Ukuqala enye yalezi zingxoxo kufanele sivule imenyu yohlelo lokusebenza bese ukhetha inketho “yengxoxo entsha eyimfihlo. Okulandelayo kufanele ukhethe oxhumana naye ofuna ukuqala naye le ngxoxo, eyimfihlo kakhulu futhi lokho kuzoba kude namehlo anhlebo.
Ngaphambi kokuba uqale ingxoxo yangasese, sizokunikeza isexwayiso; Uma uthatha isithombe-skrini sengxoxo yalolu hlobo, qaphela ngoba kuzovela umyalezo oyisixwayiso koxhumana naye okhuluma naye ngalokho okwenzile.
Uma kwenzeka ubumfihlo obuhlinzekwa yizingxoxo zangasese zeTelegram kubonakala kukuncane kuwe, usenenye indlela eyodwa yokuvimbela noma ngubani ukuthi ahlebe noma ahlole izingxoxo zakho. Kunoma iyiphi ingxoxo yangasese siyoba nenketho yokwenza kusebenze ukuzilimaza kwemiyalezo.
Ukwenza inketho yokuthi imilayezo esiyibhalayo futhi siyithole izilimaze, kufanele nje sichofoze kusithonjana esisikhombisa iwashi elincane nokuthi, yize kuya ngohlobo esilusebenzisayo, kuvame ukuba semshinini lapho sibhala khona ukuthumela imiyalezo.
Ngaphandle kokuthi iningi lethu likholwa okwesikhashana ukuthi iWhatsApp isungule isheke eliphindwe kabili ukuze abasebenzisi bazi ukuthi umyalezo wabo usufundwe nini, besinephutha kakhulu. Futhi yilokho isikhathi eside, isikhathi eside ukuthi leli sheke eliphindwe kabili likhona kuTelegram.
Ukusebenza kwesheke elikabili kufana kakhulu nalokho esikwaziyo ku-WhatsApp, yize kunomehluko othile. Amasheke amabili apendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka akhombisa ukuthi umyalezo ufundwe ngumsebenzisi owutholile futhi ukubonakala kwesheke elilodwa kusho ukuthi umyalezo uthunyelwe. Uma kuvela isheke eliphindwe kabili elingapendiwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kusho ukuthi umyalezo utholwe ngumamukeli kodwa ingxoxo ayikavulwa.
Izinhlelo eziningi zemiyalezo ziyasivumela vimba labo oxhumana nabo abasikhathaza sonke isikhathi noma isikhathi, noma bamane labo basebenzisi esingafuni ukukhuluma nabo nganoma yisiphi isizathu.
Ukuvimba noma yimuphi oxhumana naye kufanele nje sifinyelele izilungiselelo zesicelo futhi sifinyelele imenyu "yobumfihlo nokuvikeleka". Uma sesikule menyu kufanele sikhethe inketho "Abasebenzisi abavinjiwe" lapho sizothola khona ukwengeza noma yimuphi umsebenzisi ohlwini lwethu loxhumana nabo abavinjiwe.
Dala iqoqo elibanzi lezitika
Enye yezinto ezaziwa kakhulu ngeTelegan yizitika zayo, ezingasusi izithonjana zendabuko, kepha zisinikeza indlela ethokozisayo yokuxhumana nabanye abasebenzisi. Namuhla izitika zazo zonke izinhlobo ziyatholakala, kepha uma zinganele ungahlala njalo dala eyakho, njengoba sikuchazile osukwini lwakhe ngale ndatshana.
Uma okufunayo ukwenza iqoqo elikhulu lezitika, ungagcina bonke labo abathunyelwe kuwe ngokuchofoza kukho bese ukhetha inketho ethi "engeza kuzitika". Kusukela ngaleso sikhathi, ungathumela leso sitikha esigciniwe kunoma imuphi umsebenzisi bese uqhubeka nokuthatha izinyathelo zokunweba i-albhamu yethu.
Jabulela i-Telegram kukhompyutha yakho
Ukusebenzisa iTelegram kusuka kudivayisi yethu ephathekayo kungaba yisiphazamiso sangempela, ngoba ukungabi nayo ikhibhodi ebonakalayo, uma sifuna ukuba nengxoxo ende. Kodwa-ke, kunesixazululo esingaphezu kwesisebenzayo nesithakazelisayo esiqukethe ukusetshenziswa kwe- Uhlobo lweTelegram lwamakhompyutha noma kunalokho lweziphequluli zewebhu.
Uma singena kwiTelegram Web singasebenzisa i-akhawunti yethu yohlelo lokusebenza lwemiyalezo esuka kwikhompyutha yethu ngezinzuzo ezibandakanya lokhu. Vele, imisebenzi efanayo nezinketho esizijabulele kunguqulo ye-smartphone zihlala zinjalo. Phakathi kwezinto ezinhle esizokwazi ukuzibhala ngekhibhodi yekhompyutha yethu, ezosivumela ukuthi sibhale ngejubane eliphakeme futhi sikwazi nokubamba izingxoxo, isibonelo ngenkathi sisebenza ngaphandle kwenkinga.
Ukukhansela i-akhawunti yakho nokususa idatha yakho akuyona into engenakwenzeka
Ngokungafani nezinye izinhlelo eziningi zalolu hlobo, I-Telegram isivumela ukuthi sisuse hhayi i-akhawunti yethu kuphela, kepha futhi sisuse yonke idatha yethu ngokushesha futhi kalula. Ngokusebenzisa ikhasi elilandelayo Singashiya i-akhawunti yethu ingasebenzi ngokuphelele ngokukhombisa inombolo ehlotshaniswa nayo.
Vele, akuyona yonke into engaba lula ukwenza i-akhawunti ingasebenzi, kuhlelo lokusebenza oluziqhenya ngobumfihlo nokuvikeleka kwalo. Ngokushesha nje lapho sibonisa inombolo yocingo ehlotshaniswa ne-akhawunti, sizokwamukela ikhodi ngombhalo wombhalo okufanele siwufake ekhasini elilandelayo esilibonisiwe. Uma ikhodi ilungile, i-akhawunti yethu yeTelegram izoba umlando.
Ngaphezu kwalolu khetho, kukhona nethuba lokusetha ukuzilimaza kwe-akhawunti yethu uma singayifinyeleli. Ukuze wenze lokhu, kufanele ufinyelele kwimenyu yezilungiselelo, bese ukhetha inketho "yobumfihlo nokuvikeleka" bese ekugcineni wenze kusebenze umsebenzi "Wokuzibhubhisa nge-Akhawunti", ukhetha isikhathi sokulinda ukuzilimaza okwenzekayo.
Ukulungele ukuba ngumpetha weTelegram ngalezi zeluleko?.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » 7 Amaqhinga wetelegram ozoba ngungoti weqiniso ngawo